ReporterNepal Updating you… » विचित्र संसार
जन्मिए एकसाथ सात बच्चा !
इराक । इराकमा २५ वर्षीया महिलाले एकै पटक सात बच्चालाई जन्म दिएकी छन् । पूर्वी इराकको दियाली प्रोविन्सको एक अस्पतालमा उनले ६ छोरी र १ छोरालाई जन्म दिएकी हुन् । इराकमा एकसाथ सात बच्चालाई जन्माएको यो पहिलो घटना भएको बताइएको छ ।स्थानीय स्वास्थ्य विभागका एक प्रवक्ताले बयान जारी गर्दै सबै बच्चा र महिलाको स्वास्थ्य ठीक […]
सामाजिक सञ्जालमा स्टार बनेको संसारकै ‘क्युट’ कुकुरको मृत्यु
प्रकाशित मिति: ८ माघ २०७५, मंगलवार
काठमाडौं । संसारकै ‘क्युट’ कुकुर ‘बू’ को मृत्यु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टार’ बनेको पामेरियन जातको ‘बू’ को १२ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको हो । ‘बू’ का मालिकका अनुसार गएको शनिबार राति सुतेकै अवस्थामा ‘बू’ को मृत्यु भएको थियो । सन् २०१७ मा आफ्नो सबैभन्दा प्रिय साथी ‘बडी’ मरेपछि ‘बू’ निकै विक्षिप्त बनेको थियो […]
नवजात शिशुलाई भुइँमा सुताएर उफ्रिने पर्व !
प्रकाशित मिति: २६ मंसिर २०७५, बुधबार
स्पेन । कहिले गोरु जुधाउने पर्व त कहिले गोलभेँडाको युद्ध यस्तै अनौठो पर्वहरुका लागि युरोपेली देश स्पेन प्रख्यात र प्रसिद्ध मानिन्छ । अहिले स्पेनमा अर्को नयाँ पर्वको सुरुवात भएको छ, जसलाई बेबी जम्पिङ फेस्टीभल भन्ने गरिन्छ । स्पेनको बुर्गोस प्रान्तस्थित क्यास्ट्रिोलोमा मनाइने यो क्याथोलिक पर्वको स्थानीय नाम एल कोलाचो हो । यो पर्वमा नवजात बच्चाहरुलाई […]
प्रेमीको हत्या गरेर प्रेमिकाले कामदारलाई खुवाइन् प्रेमीकै मासु !
प्रकाशित मिति: ६ मंसिर २०७५, बिहीबार
दुबई । मोरक्कोकी एक महिलाले ७ वर्षदेखि प्रेमसम्बन्ध रहेका प्रेमीको हत्या गरेर प्रेमीको मासु कामदारलाई खुवाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । ती महिललो प्रेमीको हत्या गरेर शरीरको भागलाई परम्परागत मासुको परिकार बनाएर पाकिस्तानी कामदारलाई दिएको भने खुल्न गएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । युवकका दाजु ओमानसँग जोडिएको सीमावर्ती सहर अल ऐनमा रहेको आफ्नो घरमा खोज्न गएपछि […]
केप टाउनका विद्यार्थीले बनाए पिसाबबाट ईटा
प्रकाशित मिति: ९ कार्तिक २०७५, शुक्रबार
दक्षिण अफ्रीका । दक्षिण अफ्रीकाको केप टाउन विश्वविद्यालयका छात्रछात्राहरुले वातावरणलाई मध्य नजर गर्दै मानिसको पिसाब प्रयोग गरेर ईटा बनाएका छन् । ईटा बनाउन नयाँ प्रयोग गरेका उनीहरुले सामान्य तापक्रममा पनि बलियो ईटा निर्माण गर्न मानिसको पिसाबमा बालुवा र ब्याक्टेरिया मिश्रण गरेका थिए । मानिसको पिसाबबाट ईटा बनाउने प्रकृया समुद्रमा मूंगा बन्ने प्रकृया जस्तै भएको केप […]
कुकुर मार्नेलाई ८० लाखको पुरुस्कार !
कोलम्बिया । लागू औषध माफियाहरूले एउटा कुकुर मार्नेलाई लगभग ८० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन् । उक्त कुकुरले लागू औषध तस्करहरूलाई समात्न प्रहरीलाई मद्दत गर्न थालेपछि माफियाहरूलाई गाह्रो परेको हो । सोम्ब्रा नाम गरेको उक्त जर्मन सेफर्ड प्रजातिको कुकुर कोलम्बिया प्रहरीको हो । कोलम्बियाली प्रहरीले सामाजिक संजालमा सोम्ब्रा आफ्नो टीमको सदस्य […]
मुम्बईको समुद्री किनारमा माछा आतङ्क, १५० जना घाइते
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०७५, मंगलवार
मुम्बई । के तपाईले आफ्नो फुर्सदको समय मुम्बईको समुन्द्री किनारमा हिड डुल गरेर बिताउने योजना बनाउनु भएको छ ? यो योजना तपाईको लागि ब्लु बोटल जेली नामक माछाको कारणले घातक हुन सक्छ । ब्लु बोटल जेलीको टोकाईबाट १५० जना घाईते भएपछि मुम्बई प्रशासनले जुहु, अक्सा र गिरगाँव समुन्द्री छेउछाउ घुमफिर गर्दा सावधान हुनुपर्ने बताएको छ […]
सयौं मानिसको ज्यान जोगाएको कुकुरको मृत्यु, लाखौं मानिसद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०७५, मंगलवार
रोम । इटलीमा काओस नाम गरेको ‘जर्मन शेफर्ड’ जातको कुकुरको मृत्यु भएपछि लाखौं मानिसहरुले दुःखी हुँदै कुकुरप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । उक्त कुकुरका मालिक फाबियानो इटोरले आफ्नो कुकुरको मृत्यु भएको जानकारी फेसबुकमार्फत दिएका हुन् । कसैले दिएको विषबाट आफ्नो कुकुरको मृत्यु भएको जानकारी उनले दिएका हुन् । फाबियानोले फेसबुकमा कुकुरलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, […]
भारतमा जन्मियो हत्केलामा अटाउँने बच्चा, यति छ तौल
नयाँ दिल्ली । सामान्यतया बच्चा जन्मिदा उसको तौल अढाई किलोदेखि साढ़े तीन किलोको बीचमा हुने गर्दछ । तर के तपाईहरुले तीन सय ७५ ग्राम तौल भएको बच्चा जन्मिएको थाहा पाउनु भएको छ ? सुन्दा अचम्म लाग्ला यति सानो तौलको बच्चा पनि जन्मिन्छ र भनेर ? तर, भारतको हैदराबादमा मात्र तीन सय ७५ ग्राम तौल रहेकी […]
बुबा र दाईले लक्ष्मीलाई जिउँदै जलाएपछि…
प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०७५, आईतवार
खण्डवा । परिवारको इच्छा विपरित विवाह गर्न खोजेको भन्दै भारतको मध्य प्रदेशको खण्डवा जिल्लामा एक युवतीलाई आफ्नै बुबा र दाईले जिउँदै जलाएका छन् । गत शुक्रबार १९ वर्षीय लक्ष्मी बाई उनका प्रेमी राजकुमार लौवंशीको घरमा जाँदा लक्ष्मीका बुबाले देखेका थिए । प्राप्त जानकारी अनुसार लक्ष्मी र राजकुमार १० महिनादेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । लक्ष्मीको परिवारलाई […]
आफन्तको मृत्युमा रोइदिँदा पाइन्छ पैसा !
प्रकाशित मिति: २९ असार २०७५, शुक्रबार
घाना । आफन्तको मृत्यु हुँदा मानिसहरु शोकाकुल हुन्छन् र हृदयदेखि नै रुने गर्दछन् । तर आजभोलि कसैको मृत्युपछि रोइदिने मानिस पनि भाडामा पाइन थालेका छन् । कसैको मृत्युपछि शोकको घडीमा डाँको छाडेर रुनका लागि कोही पेशेवर रुन्चे मानिसहरुलाई पैसा तिरेर भाडामा लिइन्छ भनेर सुन्दा तपाईहरुलाई अचम्म लाग्ला । तर यो सत्य कुरा हो । अफ्रिकी […]
चर्चित बन्यो यी हजामको मेस्सी कट
साइबेरिया । साइबेरियाका एक हजाम अहिले निकै चर्चामा छन् । विश्वकपलाई ध्यानमा राखेर उनले मानिसको कपाल काट्दा टाउकोमा विभिन्न आकृति बनाउने गरेका छन् । विश्वकप फुटबलको बेला प्रशंसकहरू आफ्ना प्रिय खेलाडीप्रति श्रद्धा देखाउनका लागि नयाँ-नयाँ तरिका खोजिरहेका हुन्छन् । साइबेरियाका यी हजामले प्रसिद्ध फुटबलरहरूको मुखाकृति टाउकोमा बनाउने गर्दछन् । मारियो हवाला नाम गरेका यी हजामले […]
पूर्वमा भेटियो अचम्मको मानिस (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति: ११ असार २०७५, सोमबार
मोरङ उर्लाबारी ५ झुम्राका यज्ञबहादुर कटवालले अदभूत कला प्रस्तुत गरेका छन् । उनले जिब्रोलाई निधारसम्म पुर्‍याएर सबैलाई अचम्ममा पारेका हुन् । जिब्रोलाई नाकको डाडोसम्म पुर्‍याउन सामान्य मानिसलाई मुस्किल पर्दछ तर यि युवाले भने निधारसम्म पुर्‍याएर सबैलाई चकित बनाएका हुन् । उनको नाकको डाडो सामान्य मानिसको भन्दा भिन्न रहेको छ । एकदमै सानो उनको नाकबाट कीराहरू […]
मेकअप गरिरहेकी युवतीको आँखामा छिर्यो आइब्रो पेन्सिल
प्रकाशित मिति: ८ असार २०७५, शुक्रबार
बैंकक । महिलाले आफूलाई सुन्दर बनाउन हरेक प्रकारका मेकअपका साम्रगी प्रयोग गर्ने गर्दछन् । मेकअपका सामग्री प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र यसले सुन्दर बनाउनुको सट्टा कुरुप बनाइदिन्छ । यस्तै भएको छ थाइल्याण्डमा । थाइल्याण्डकी एक महिलाले ट्याक्सीमा मेकअप गर्नेक्रममा उनको आँखामा आइब्रो पेन्सिल छिरेको छ । बैंकककी यी २० वर्षीया युवती आफ्नो साथीको […]
अनलाइनमा साइकल गरेका थिए अर्डर, आइपुग्यो माउसुली !
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार
अनलाइनमा सामान अर्डर गरी घरसम्म पुग्ने हुँदा आजभोलि मानिसहरु त्यसतर्फ निकै आकर्षित भएका छन् । अझ विदेशतिर त अनलाइन अर्डरको चलन निकै छ । कहिले काही त हामीले अनलाइनमा एउटा सामान अर्डर गरेका हुन्छौ, तर उनीहरुले गल्तीवश अर्काे सामान घरमा पुर्याउने गर्दछन् । यस्तै घटना घटेको छ क्यालिफोर्नियामा । क्यालिफोर्नियाका एक जोडीले अनलाइनमा साइकल अर्डर […]
टेकु अस्पतालका निर्देशकलाई कोरोनाको पहिलो खोप लगाइने
देश अगाडि बढ्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
विवाह बन्धनमा बाँधिए मुख्यमन्त्री राई र जाङ्‍मु शेर्पा
स्वस्थानी व्रतकथा माघ १५ देखि
तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने सम्भावना छैन : महामन्त्री कोइराला
बुधबार ३१८ कोरोना संक्रमित थपिँदा ३८३ जना निको भए